Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || तीजको लहर आयो बरिलै... – kayakairan.com
तीजको लहर आयो बरिलै…
नेपाली महिलाहरुको ठूलो पर्व हरितालिका तीजअन्तर्गत आज दर खाने दिन । गाउँ टोलमा बज्ने तीजगीत र विभिन्न सामुहिक कार्यक्रमहरुले तीजको रौनक बढाइरहेको छ । स्वभावैले श्रृंगार, पहिरन र सुन्दर देखिने चाह राख्ने महिलालाई तीजमा अझ बढी राम्री देखिने रहर हुन्छ । विवाहित नारीले १६ श्रृंगार गर्न कसैको धक मान्नु नपर्ने भएकाले पनि उनीहरुलाई अझ बढी चासो हुने गरेको पाइन्छ ।
श्रीमान्को दीर्घायु एवं परिवारको सुखको कामना गर्दै निराहार ब्रत बस्दा महिलाहरुले श्रृंगार, गीत र नृत्यमा नै आफैलाई भुलाउने कोसिससमेत गर्ने हुँदा यस दिनको साजसज्जालाई सबैले साथ दिएको देखिन्छ । अधिकांश सर्वसाधारण महिला आफू सुन्दर देखिन आफूले मन पराउने सेलिब्रिटीलाई पनि ‘फलो’ गरिरहेका हुन्छन् । सेलिब्रिटीहरु पनि निकै उत्साहका साथ यो पर्व मनाउने गर्दछन् ।
इभेन्ट अर्गनाइजर लक्ष्मी पन्तलाई तीज निकै रमाइलो लाग्छ । नेपालगञ्जमा आफ्नो बाल्यकाल र किशोरावस्था बिताएकी उनलाई नेपालगञ्जमा हुँदा मनाएको तीजको अझै पनि निकै याद आउँछ । “अन्य समुदायका मानिसको बाक्लो बस्ती भएको त्यो ठाउँमा केही परिवार मात्र मिलेर भएपनि चौतारामा जम्मा भएर आफैले रचना गरेका गीत गाएर तीज मनाएका ती दिनहरु निकै रमाइला थिए,” उनले सम्झिदैं भनिन् “हामी ७ जना दिदीबहिनी थियौं र अरु दुई चार घरका दिदीबहिनी मिलेर पनि आफ्नो समुदायले मनाउने पर्व निकै उत्साहले मनाउँथ्यौं ।” चौतारामा गाउने गरेको तीज गीत ‘डाँडै टल्क्यो ढुकुरको बगाल, कम्मरै टल्क्यो पेटी बरिलै, छोरी राम्री सबैभन्दा कान्छी बुहारी राम्री जेठी बरिलै’ गुनगुनाउँदै उनले भनिन्, “आजकलका गीतमा तीजका मर्म अलि भेट्दिनँ ।” शब्द बदलिएपनि भाकाहरु मौलिक राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, “पहिले–पहिले समाज उदार थिएन, महिलाहरुले आफ्ना कुरा, दुःख वेदना पोख्न पनि तीज कुर्नुपथ्र्यो, कतिपय महिला हिंसाका घटना, दाइजोका कारण भएका हिंसाका घटना त तीजगीत बनेपछि मात्र थाहा हुन आउँथे । महिलाहरुको मात्र पर्व, जसले महिलाकाका कुरा राख्न कुनै डर त्रास मान्नु नपर्ने अवसर दिने गर्छ त्यस्तो पर्व धुमधामले मनाउनुपर्छ ।”
बिहेअघि रहर र दिदिबहिनीको देखासिकीले र २०५१ सालमा बिहे भएपछि निरन्तर तीजको ब्रत बस्दै आएकी पन्तले विहेपछि दुई वटा तीजमा ब्रत तोडिन् । “श्रीमान्सँग ठाकठुक परेको थियो, जसको लागि ब्रत बस्यो, उसैले साथ नदिने भन्ने भाव आयो अनि ब्रत नै बसिन,” ठूलो हाँसोसँगै उनले भनिन्, “तर, श्रीमान्लाई श्रीमती आफ्नो लागि ब्रत बसोस्, श्रृंगार गरोस् भन्ने लाग्दोरहेछ मुहारमा छुट्टै प्रशन्नताको आभाष हुन्छ, फोटो खिचौं भन्नुहुन्छ ।”
लायन्स क्लब अफल चितवन सिटी मर्सीकी अध्यक्षसमेत रहेकी पन्त यो वर्षको तीजको दिन सामाजिक कार्यमा नै व्यस्त रहदैं छिन् । आफ्नै संस्थाले नृत्य प्रतियोगिता राखेकाले अरु थुप्रै महिलाहरु एकै ठाउँमा भेला भई तीज मनाउने तयारीमा रहेकी छिन् ।
तीजको पहिरन : पुरानै सारी लगाऔं भव्य तीज मनाऔं’ भन्ने अभियान नै राखेकाले यो वर्ष नयाँ पहिरन किन्ने सोचमा छैन तर तीज विशेषमा सारी र लेहेंगा मन पर्छ ।
श्रृंगार : अघिपछि सामान्य पहिरनमा कामकाजमा रहने भएपनि पन्तलाई तीजको दिन सोह्र श्रृंगार गर्न मन पर्छ । “अरु बेलाभन्दा तीजमा अलि बढी मेकअप गरेपनि सुहाउँछ जस्तो लाग्छ”, उनले हाँस्दै भनिन् । ब्राण्डमा त्यति ‘स्ट्रिक्ट’ नभएपनि लोरेलका उत्पादन बढी प्रयोग गर्ने पन्तले बताइन् ।
परिकार : तीज भनेकै घरमा दिदिबहिनी ,आफन्त, साथीभाइ जम्मा भई खाने खुवाउने अवसर समेत हो । केही वर्ष यता भान्साको कामकाजमा समय दिन नभ्याएकी पन्त आफ्नो घरमा दर पाक्दा लट्ट्े टुटाउंदिनन् । तर उनले बनाएका खानामा सबैले मन पराएर सम्झिने परिकार कुखुराको मासु हो ।
आवश्यक सामाग्रीः कुखुराको मासु, घ्यू , मेथी, नुन, बेसार, जिरा/धनिया पाउडर
पकाउने विधि : गहिरो कराईमा अलि बढी घ्यू तताउने , घ्यू तातिसकेपछि मेथीलाई कालो हुंदा सम्म फुराउने त्यसमा ससाना पिस गरिएको कुखुराको मासुलाई डिप फ्राई गर्ने । मासु रातो रातो क्रिस्पी हंदै गर्दा आवश्यकता अनुसार वेसार , नुन र जिरा मसला राख्ने । भुटेर रातो भएपछि मासु तयार हुन्छ । त्यसमा अरु केही पनि नराख्दा समेत फरक स्वादले गर्दा सबैले रुचाउंछन् ।
सरिता गुरुङ श्रेष्ठ
तीज सुरु हुनु एक महिना अघिदेखि तीजभरि नै निकै व्यस्त रहने सेलिब्रिटी हुन् गायिका सरिता गुरुङ श्रेष्ठ । उनले व्यावसायिक पाटोबाट तीज सम्झिन्छिन् भने दर्शक स्रोताले तीजगीतकै लागि पनि उनलाई तीजमा एकपटक सम्झेकै हुन्छन् । वि.सं. २०६१ सालको चितवन महोत्सवमा लोकगीत प्रतियोगितामा पहिलो पटक गीत गाएकै बेला प्रथम पुरस्कार जितेपछि गायन यात्रा सुरु गरेकी श्रेष्ठ अहिले विदेशमा पनि कार्यक्रमहरुमा पुग्ने गरेकी छन् । विभिन्न तीजगीत प्रतियोगिताहरुमा निर्णयकको भूमिका, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुका लागि आउने निम्तो मान्दा तीजभरि भरी नै व्यस्त रहन्छिन् । वि.सं. २०६४ सालदेखि लोकगीत गाउन थालेकी श्रेष्ठले २०६९ मा पहिलो तीजगीत निकालेकी थिइन् । श्रेष्ठले यसवर्ष पनि तीजगीत बजारमा ल्याएकी छिन् ।
सुरुआतका केही वर्ष पुरुष गायकसँगै तीजगीत गाएकी श्रेष्ठले यसपटक एकल गीत ‘काँकरीको झ्याल’मा ल्याएकी छन् । “तीजका गीतमा मौलिकता हराउँदै गएको र तीज गीतहरु उच्छृंखल हुँदै गएको भन्ने गुनासो बढ्न थालेपछि मौलिकताका लागि आफैले सुरुआत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो र यो गीत ल्याएँ”, उनले भनिन् । २५ वर्षअघि १६ वर्षकै उमेरमा अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकी श्रेष्ठले सुरुआती केही वर्ष निकै संघर्षका दिन बिताउनुप¥यो ।
पहिलो सन्तान नौ महिनाको हुँदा नै रोजगारीका लागि श्रीमान् विदेशीएपछि उनको संघर्ष अझ बढ्यो । “१० वर्षसम्म पनि हाम्रो विवाहलाई माइतीले स्वीकारेको थिएन, जसका कारण चाडपर्व अझ विशेष तीजमा निकै खल्लो लाग्थ्यो”, उनले सम्झिइन्, “पहिला तीजमा बोलाएनन् भनेर दुःख लाग्थ्यो, अहिले कार्यक्रमहरुको व्यवस्तताले जान पाउँदिन अनि दुःख लाग्छ ।”
श्रीमान्ले साथ दिएकाले मात्र यो स्थानमा आउन सफल भएको उनी गर्वसाथ बताउँछिन् । “अहिले छोराबुहारी र छोरीले समेत समय व्यवस्थापनलाई सहज बनाइदिएका छन्”, उनले भनिन्, “पहिला–पहिला धेरै ब्रत बस्ने गर्थें, तीजमा त निराहार नै बस्थें । तर, आजभोलि स्वास्थ्यले साथ दिदैन ।” स्वास्थ्यमा सचेत हुनैपर्ने र ब्रत बस्दा फलफूल र पानी टन्न पिउन उनले सल्लाह दिएकी छन् । तीजमा सधैं ब्रत बसेपनि श्रीमान् विदेशमा रहेकाले श्रीमान्कै लागि ब्रत बसिने तीजमा खल्लो लाग्ने गरेको श्रेष्ठले बताइन् ।
पहिरन : समुदायमा हुने तीज विशेष कार्यक्रमहरुमा दैनिक जसो जानुपर्दा सारी नै लगाउने श्रेष्ठको रोजाईमा तीजमा पनि सारी नै पर्ने गर्छ । यसपटक विशेष तयारी नगरेपनि रातो सारी नै लगाउने सोच बनाएको उनले बताइन् ।
श्रृंगार : तीजको बेला पहिरन सुहांउदो सोह् श्रृंगार रामै्र लाग्ने श्रेष्ठले बताइन् । महिलालाई पहिरन भन्दा पनि छरितो श्रृंगार र लज्जाले नै सुन्दर देखाउंछ जस्तो लाग्ने उनको भनाई छ । “पहिले पहिले श्रंगार बारे त्यती वास्ता भएन, तर अहिले अलि अलि ध्यान चांही दिन्छु श्रेष्ठले भनिन्, “ “ कुनै ब्राण्ड विशेष सौन्दर्य सामाग्री प्रयोग गर्ने बानी छैन । ”
परिकार ः “कार्यक्रमहरुमा व्यस्त हुने भएकाले तीजकै बेला दर खुवाउन भ्याउंदिन, ” श्रेष्ठले भनिन ्“ सबैलाई बोलाउन खान, खुवाउन रमाइलो लाग्ने हुँदा तीज पछि भएपनि बोलाउने गर्छु ।” दरमा खिर टुटाउन मन लाग्दैन तर आफूले बनाएको मासुको परिकार र अचारको निकै तारिफ पाउने गरेको उनले सुनाइन् ।
मिक्स अचार बनाउने विधि एवम् आवश्यक सामग्री ः
उसीनेको आलु, कांक्रो,हरियो केराउ, गांजर,मुला,वन्दा , हरियो धनियाँ , भुटेर पिनेको तिल, हरियो खुर्सानी,नुन,वेसार, तेल
उसिनेको आलुलाई सुहांउदो आकारमा काट्ने , कांक्रो, गाजर, मुला र वन्दालाई त्यही अनुसारको आकारमा काट्ने , काटेका सामाग्रीलाई एउटा फराकिलो भांडामा राखेपछि भिजाएको हरियो केराउर चिरेर काटेको हरियो खुर्सानी राख्ने त्यसमा भुटेर पिनेको तील आवश्यकता अनुसार राख्ने, नुन, र वेसार राखेपछि एउटा प्यानमा तेल तताउने । तेल तातेपछि मेथी कालो भइन्जेल फुराउने र मिक्समा राखेको वेसार माथी तेल झान्ने ।त्यपछि आवश्यक स्वाद अनुसार अमिलो राखेर मोलेपछि मुखै रसाउने स्वादिलो मिक्स अचार तयार हुन्छ ।
नृत्य निर्देशक एवं कोरियोग्राफर रेनु तामाङलाई पनि तीजमा भ्याइनभ्याइ छ । सरिता गुरुङ श्रेष्ठको नयाँ तीज गीतमा मोडलिङ, कोरियोग्राफी र म्युजिक भिडयो निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरेकी चितवन डान्स सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक तामाङ एक महिना अघिदेखि नै तीज विशेष गीतहरुको नृत्य कम्पोज र निर्देशन गरिरहेकी छिन् । “तीजमा महिलाहरु नाचगानमा रमाउने हुँदा अरुले नाचेको बेला आफै पनि नाच्न रहर गर्छन्”, उनले भनिन्, “मेरो डान्स एकेडेमीमा आउने महिलालाई पनि तीजमा सजिलो होस् भन्नका लागि तीजगीतमा पनि नृत्य सिकाउने गर्छु ।” तीजका अधिकांश कार्यक्रममा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने तामाङ तीजको माहोलमा निकै रमाउने गर्छिन् ।
विभिन्न इभेन्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फेशन शो, ¥याम्प वाल्क, स्टेज कार्यक्रमको कोरियोग्राफी गरेकी तामाङ मिसेज चितवन फस्र्ट रनरअपसमेत हुन् । २०५५ सालमा १६ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी तामाङको एक छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमान् मनोज कुमार तामाङ चलचित्रमा नृत्य निर्देशक भएकाले श्रीमान्कै साथ र हौसलाको कारण यो क्षेत्रमा आफू स्थापित हुन सकेको उनी बताउँछिन् । सकारात्मक सोचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्ने तामाङ आफूले सन् २००५ देखि सञ्चालनमा ल्याएको डान्स एकेडेमीबाट हजारौं विद्यार्थीले नृत्य सिकेर करिअरकै रुपमा अघि बढाएको दावी गर्छिन् । “१० वर्ष अघिसम्म नृत्य र कला क्षेत्रलाई राम्रो मानिन्थेन, तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ”, तामाङले भनिन्, “परिवारले नृत्य सिक्न चाहने सन्तानलाई हौसला सहित सिकाउन पठाउन थालेका छन् ।”
आफ्नो बाल्यकाल भारतमा बिताएकी तामाङलाई सुरु–सुरुमा तीज नौलो लाग्थ्यो । “आमा क्षेत्री भएपनि मामाघर नगएको र मगर बुबाको घरमा तीजकै अवसरमा खासै चहलपहल नदेखेकोले बाहुन क्षेत्रीले मात्र तीज मनाउने रहेछन् कि भन्ने पनि लाग्यो”, तनहुँमा बिताएका केही बाल्यकाल स्मरण गर्दै उनले भनिन्, “अझ राति उठेर खाने दर भन्या कस्तो हुन्छ होला भन्ने कौतुहलता नै हुन्थ्यो ।अहिले बुझें यो त सबै नेपाली महिलाको पर्व रहेछ ।” खानाको सौखिन तामाङ भोक खप्न नसकेकै कारण ब्रत नबस्ने बताउँछिन् । “श्रीमान्लाई पनि थाहा छ भोक खप्न सक्दिन भन्ने”, उनले भनिन्, “नबस नै भन्नुहुन्छ ।”
पहिरन :नृत्य निर्देशक तामांग तीजमा पनि काम गर्ने बेला सजिलोको लागि कुर्ता सलवार र कार्यक्रमहरुका लागि सारी नै रुचाउंछिन् । महंगो र भड्किलो भन्दा पनि साधारण तर अरु भन्दा फरक देखिने खालको रंगको कम्बिनेसन रुचाउने तामांग यस पटक तीजमा पनि रातो पट्टिकै केही उज्याला कपडा लगाउने सोचमा छिन् ।
श्रृंगारः पहिरन अनुसारको मेकअप रुचाउने तामांग अ गरगहनामा भने कम जोड दिन्छिन् । ब्राण्डमा भने अलि कन्सस छिन् हंगकंगमा रहेकी बहिनीसंग मगाएका रेभलनका उत्पादन मात्र प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताइन् । “सुटिंगको बेला धेरै मेकअप प्रयोग हुन्छ यसले अनुहार र छालामा असर पुगेको हुन्छ,” उनले भनिन् त्यसैले महिनामा दुई पटक फेसियल र अन्य ट्रिटमेन्टका लागि पार्लर जान्छु ।”
हेल्थ टिप्स : पोषणका तत्व पु¥याएर कम चिल्लो भएका खाना खान सुझाउने तामांग खाली पेटमा मनतातो पानी प्रयोग गर्न जोड दिन्छिन् ।फिटनेशको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ म सबैलाई भन्छु दैनिक थोरै थोरै गरी तिन लिटर पानी नटुटाउनुहोला । साथै पसिना वगाउने खालको कुनै पनि व्यायाम गर्न समेत आवश्यक रहेको उनले बताइन् । यसले स्वास्थ्य संगै अनुहारमा चमक ल्याउंछ ।
दर परिकार : खानाको सौखिन भएकाले खाना पकाउन पनि निकै जांगर चल्ने तामांग दरमा खिर बनाउन रुचाउंछिन् । आफूले बनाएको माछा मासु सबैले तारिफ गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
फरक फरक खाना बनाउन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने तामांगले आफूले बनाउने पालुंगोको परौंठा पनि निकै स्वादिलो हुने बताइ् ।
पालुंगोको परौंठा बनाउन चाहिने सामाग्री र विधी
गंहुको पिठो, पालंगोको ताजा साग,ज्वानो, नुन र घ्यू
मसिनो गरी काटेको पालुंगोको साग आवश्यकता अनुसार गंहुको पिठोमा मिसाउने र बराबर चलाएर मिक्स गर्ने , नभुटेको ज्वानो स्वादको लागि राख्ने र स्वाद अनुसार नै नुन राखेर मिसाउने । थोर्र थोरै पानी राख्दै पिठो मुछेर नरम डलला बनाउने । रोटी बेलेर भ्याएपछि ननस्टीक पयान आगोमा बसाल्ने प्यान तोपछि बेलेको परौठा प्यानमा पकाउन हाल्ने र माथीबाट विस्तारै थोरै थोरै घ्यू लगाउने । थोरै र सही रुपमा घ्यू लागोस् भन्नका लागि कुसिंग व्रस प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुबैपट्टी घ्यू लगाउंदै पकाउने र वास्ना ले नै पाकेको थाहा हुन्छ । निकालेर प्लेटमा चिसो दही वा चिया कफी संग पनि सर्भ गर्न सकिन्छ ।
सुष्मा थापा लम्साल
२०७३ साल चैत १४ गते पहिलो मिसेस चितवन घोषणा भई ताज पहिरिएकी सुष्माको परिचय त्यसपछि फेरियो । एउटा बैंकमा काम गर्ने साधारण महिलाको परिचय त्यसपछि एक जिम्मेवार, निडर अनि बोल्ड महिलाका रुपमा आयो । दाताज इभेन्टको ब्यानरमा आयोजित प्रतियोगिता जितेर सबैको नजरमा परेकी ‘मिसेज चितवन २०१७’ सुष्माको ताज अवधि सकिएपनि तीजमा व्यस्त छिन् । इभेन्टको एक वर्ष आयोजकसँग सहकार्यमा विभिन्न इभेन्ट, तीज कार्यक्रम र फेसन शोमा संलग्न सुष्माले आफूमा निखार ल्याउन मोडल हन्टमा थप प्रशिक्षणसमेत लिइसकेकी छिन् ।
प्रतियोगिताले आफूलाई अरु समक्ष आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्न आत्मविश्वास बढाएको बताउने सुष्मा यसको श्रेय श्रीमान्लाई नै दिन्छिन् । विदेशमा रहेर पनि प्रतियोगितामा जानका लागि निरन्तर हौसला दिएकै कारण आफू स्टेजसम्म पुगेको र त्यसपछि मात्र ताज जितेको उनको भनाइ छ । “मभन्दा बढी मेरो श्रीमान् मेरो जित हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो”, उनले भनिन् । सकारात्मक सोच राख्न सके मात्र जीवनमा खुसी आउने विश्वास उनको छ । ब्राह्मण र क्षेत्री परिवारमा भएको अन्तरजातीय विवाहलाई सुरुआतमा साथ नमिलेपनि अहिले एकदम राम्रो जीवन रहेको सुष्माले बताइन् ।
सानैमा बाबु गुमाएकी सुष्मा अभावबीच पनि आमाले दुःखबाट टाढा राखेर हुर्काएको क्षण सम्झेर निकै भावुक हुन्छिन् । आफू पनि एक सन्तानको आमा भइसकेपछि मात्र यसको महत्व बुझेको उनले बताइन् । एक दाजु र एक बहिनीसँगै हरेक पर्वको रमाइलो स्मरण रहेपनि दिदिबहिनीको तीज निकै प्यारो रहेको उनले बताइन् । “तीज आउँदा कपडाको सल्लाह, ब्रत बस्ने, पूजा गर्ने हरेक कुरामा दिदीबहिनीको सल्लाह हुन्थ्यो”, उनले भनिन् ।
सुष्माको बिहेपछिको पहिलो तीज निकै यादगार रह्यो । त्यसो त तीजमा श्रीमतीले मात्र श्रीमान्को दीर्घायु अनि समृद्धिको लागि ब्रत बसी पूजा गर्छन् । तर, सुष्माका श्रीमान्ले पनि सुष्माको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको लागि ब्रत बसे । श्रीमान्ले नै तीजका लागि ल्याइदिएको कपडा र श्रृंगार लगाएर उनीहरुसँगै मन्दिर पनि गए र पूजा गरे । साँझ दुवैले एक अर्कालाई जल पिलाएर ब्रत समापन गरे । त्यसपछिका वर्षहरुमा पनि यो क्रम जारी नै रहेको उनी बताउँछिन् । “अहिले दुई वर्ष भयो श्रीमान् विदेश हुनुहुन्छ”, उनले भनिन्, “तीजमा यो सबै कुरा एकदम मिस हुन्छ । प्रविधिको विकासले अलि सहज बनाएको छ सामाजिक सञ्जालमार्फत लाइभ हेरेर ब्रत तोड्ने गरेको छु ।”
पहिरन : सुष्मालाई कुर्ता सलवार सजिलो लाग्छ । तर तीजमा लगाउने पहिरनमा सारी नै पर्ने गरेको छ यद्यपी त रातै लगाउनुपर्छ भन्ने उनलाई लागद्यैन । अरु भन्दा फरक देखिन सबै कम्विनेशन मिलाएर पहिरन लगाउन उनलाई मन पर्छ । छरितो देखिने र नाच्न सहज हुने गरी पहिरन लगाउन मन पर्छ ।
श्रृंगार : थिम वेस्ड कार्यक्रमको आधारमा श्रंगार गर्ने गरेको भन्दै तीजमा रातो चुरा, सिन्दुर, पोते, धागो लगाउने उनले बताइन् । पार्लर खासै जान नरुचाउने सुष्मा आफैं मेकअप गर्न रुचाउंछिन् । उमेरसंगै पार्लरको उपयोग गर्न भने सजग रहेको उनले बताइन् ।
हेल्थ टिप्स : सन्तुलित भोजन र दिनमा कम्तीमा तिन लिटर पानी पिउन उनले सुझाइन् । निरन्तर व्यायाम गर्दा पनि फिटनेश र स्वास्थ्य दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले अल्छी गर्न नहुने उनले बताइन् ।
दर परिकार : कुनै पनि पर्वको आफ्नै मुल्य मान्यता हुने भएकाले पर्व अनुसारका खाना बनाउन उनलाई रुची लाग्छ ।तीजमा पनि दरमा लट्टे खीर बनाउन रहर लाग्ने उनी आफ्नो छोरा, आफन्त र साथीको लागि भने विशेष माछाको परिकार बनाउंछिन् ।
माछा — दुई केजी
लसुन,अदुवा,हरियो धनिया,नुन वेसार,तेल,कागती,अलिभ आयल,
अचारको लागि टिमुर , हरियो खुर्सानी, ः टिमुर र हरियो खुर्सानी पिसेर मसिनो बनाउने नुन र अमिलो स्वाद अनुसार राखेर अचार बनाउने ।
विधिः माछाको ससानो पिस बनाउने र एउटा फराकीलो भांडामा लसुन अदुवाको पेष्ट ,नुन,वेसार,जिरा र धनिया पाउडर, हरियो धनिया मसिनो गरी काटेर मिक्स गर्ने कागतीको रस पनि राखेर मोल्ने अनि एक घण्टा जति फ्रिजमा राख्ने । फ्रिजबाट निकालेपछि फेरी एकपटक चलाउने र मेटालिक फोइलमा राखेर वाफमा राखेर करिव २५ मिनट जति स्टिम गर्ने ।
त्यसपछि ननस्टिक प्यानमा थोरै अलिभ आयल राखेर विस्तारै फ्राई गर्ने ।
हल्का खैरो हुन लागेपछि निकालेर प्लेटमा राखी अचारसंग सर्भ गर्ने । निकै हेल्दी अनि फरक स्वादको माछा सबैलाई मन पर्छ ।